तीस किलोको बोरामा पच्चिस किलो मात्रै ! कसले गर्छ खाद्यान्नमा कालोबजारी ? – Online Jagaran
तीस किलोको बोरामा पच्चिस किलो मात्रै ! कसले गर्छ खाद्यान्नमा कालोबजारी ?
३० बैशाख २०७७, मंगलवार ०६:०४ May 12, 2020 जागरण
कालिबहादुर नेपाली ।
जाजरकोट, ३० बैशाख (रेडियो जाजरकोट) । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा रहेको नायकवाडा खाद्य डिपोमा कालोबजारी हुने गरेको आशंका गरिएको छ । ३० किलो तौल भएको अरुवा चामलको बोरामै तौल २५ किलो भए पछि स्थानीय नागरिकले कालोबजारी भएको गुनासो गरेका छन् ।
घाट खाद्य डिपोका कार्यालय प्रमुख जयकृष्ण चौधरीले चामलको तौल ३० किलोबाट झरेर २५ किलो भएपछि एक हप्ता अघि गाउँपालिकालाई जानकारी दिएको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले बारेकोट गाउँपालिकाका उपभोक्ताहरुले यसमा जसको मिलमतो छ तत्काल आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग समेत गरेका छन् ।
घाट खाद्य डिपोमा चामल नापतौलका लागि प्रयोग गरिने सामग्री प्रयोग विहीन छन् । नापतौलका सामग्री प्रयोग नगर्दा उपभोक्ता निकै मारमा परेको स्थानीय राजेन्द्रविक्रम सिंहले जानकारी दिनुभयो । कार्यालय प्रमुख चौधरीले भने नाप तौलका अन्य सामग्री प्रयोग नभएपनि डिजिटल काँटा प्रयोग गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
कर्णालीमा कडाई यथावत्, यी काममा हुँदैन अवरोध हेर्नुहोस्
कर्णाली रैबार २०७७/०१/३० (विहान)
पुस २६ मा बहुउद्देश्यीय सहकारी एकिकरणको सुर्खेतमा पहिलो घोषणा हुने
५ पुष २०७६, शनिबार १५:१६ December 21, 2019 जागरण